6 Vanhu pavakatanga kuwanda panyika uye pavaibereka vanasikana, 2 vanakomana vaMwari+ wechokwadi* vakatanga kuona kuti vanasikana vevanhu vakanga vakanaka. Saka vakatanga kutora vese vavainge vada vachivaita madzimai avo. 3 Jehovha akabva ati: “Handisi* kuzongosiya munhu akadaro nekusingaperi,+ nekuti anongova zvake wenyama.* Saka mazuva ake achasvika makore 120.”+ 4 Mumazuva iwayo uye pashure pacho, panyika paiva nevaNefirimu.* Nguva iyoyo vanakomana vaMwari wechokwadi vakaramba vachirara nevanasikana vevanhu, uye vanasikana ivavo vaivaberekera vanakomana. Ava ndivo vanhu vekare vaiva nesimba, varume vaiva nemukurumbira. 5 Saka Jehovha akaona kuti uipi hwemunhu hwakanga hwanyanya panyika uye kuti zvese zvaaifunga uye zvaiva mumwoyo make zvakanga zvakangoipa nguva dzese.+ 6 Jehovha akademba* kuti akanga aita vanhu panyika, uye mwoyo wake wakarwadziwa.+ 7 Saka Jehovha akati: “Ndichabvisa panyika vanhu vandakasika, vanhu pamwe chete nezvipfuwo, mhuka dzinokambaira, uye zvisikwa zvekudenga zvinobhururuka, nekuti ndinodemba kuti ndakazvisika.” 8 Asi Noa akanzwirwa nyasha naJehovha. 9 Iyi ndiyo nhoroondo yaNoa. Noa akanga ari munhu akarurama.+ Akanga asina mhosva* pakati pevanhu venguva yake.* Noa akafamba naMwari wechokwadi.+ 10 Nekufamba kwenguva, Noa akabereka vanakomana vatatu, Shemu, Hamu, naJafeti.+ 11 Asi Mwari wechokwadi akaona kuti nyika yakanga yaora, uye kuti yakanga yazara nekurwisana. 12 Zvechokwadi Mwari akatarisa nyika, akaona kuti yakanga yaora; nzira yemunhu wese yakanga yashata panyika.+ 13 Mwari akazoti kuna Noa: “Ndafunga kuparadza nyama yese, nekuti vanhu vaita kuti panyika pazare nekurwisana, saka ndiri kuvaparadza pamwe chete nenyika.+ 14 Zvigadzirire areka nemuti unobudisa zvinonama.+ Uikamure-kamure mukati mayo, woinama netara+ mukati nekunze. 15 Aya ndiwo magadziriro auchaiita: Areka yacho inofanira kunge yakareba makubhiti* 300, yakafara makubhiti 50, uye yakakwirira makubhiti 30. 16 Uchagadzira hwindo rinopinza chiedza* muareka, kubhiti rimwe chete kubva kumusoro. Unofanira kuisa suo reareka parutivi payo+ uye woigadzira iine nhurikidzwa yepasi, yechipiri neyechitatu. 17 “Ini ndichaunza mafashamo+ panyika kuti ndiparadze nyama yese ine upenyu* iri pasi pedenga. Zvese zviri panyika zvichaparara.+ 18 Uye ndiri kuita sungano yangu newe, uye unofanira kupinda muareka nevanakomana vako, nemudzimai wako, nemadzimai evanakomana vako vauinavo.+ 19 Uye pinza muareka zvisikwa zvese zvipenyu+ zviri zviviri zviviri, chikono nechikadzi,+ kuti zvichengetedzwe zviri zvipenyu pamwe chete newe; 20 zvisikwa zvinobhururuka, maererano nemarudzi azvo, nezvipfuwo, maererano nemarudzi azvo, nezvese zvinokambaira panyika, maererano nemarudzi azvo, zvinofanira kupinda imomo maunenge uri zviri zviviri zviviri kuti zvichengetedzwe zviri zvipenyu.+ 21 Asi iwe, unofanira kuunganidza zvekudya zvemarudzi ese,+ kuti zvizova zvekudya zvako nezvemhuka.” 22 Noa akaita zvese zvaakanga arayirwa naMwari. Akaita izvozvo chaizvo.+
^ Dimikira rechiHebheru rinoreva ngirozi dzaMwari.
^ Kana kuti “Mweya wangu hausi.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “nekuti anoita maererano nezvinodiwa nenyama.”
^ Zvingava zvichireva kuti “Vawisi,” kureva kuti vaya vanoita kuti vamwe vawe kana kuti vadonhe. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “akarwadziwa.”
^ ChiHeb., “pezvizvarwa zvake.”
^ Shoko racho rechiHebheru nderekuti tso′har. Vamwe vanoti tso′har inoreva denga rakakwirira nechepakati nekubhiti rimwe chete, kwete kuti ihwindo rinopinza chiedza.
^ ChiHeb., “ine mhepo yekufema yeupenyu.”